HOT TUB, Waterfront, KING bed, Kufuphi ne Lejeune,
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJonathan
Umbono oMhle kunye namanzi anoxolo aphuma kwiveranda yakho yangasemva. Indlela ikufuphi kodwa xa uphuma kwisithuthi sakho, uziva ngathi ukule paradesi yakho. Imbono evela kwi-master bdrm kunye nedekhi ayichazeki. Ungaloba ngokoqobo, okanye uqalise i-kayak ukusuka kwiyadi yangasemva! Imbali yedolophu yaseSwansboro kukuhamba nje okufutshane. Kufana nokubuyela umva ngexesha. Iivenkile zaseLil, indawo yokutyela engasemanzini, iilekese & nevenkile ye-Ice cream. Siziikhilomitha ezili-10 ukusuka eJacksonville kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka elunxwemeni.
Eli khaya lakhiwa kwiminyaka yee-1960 kwaye liye lasinda kwiinkanyamba ezininzi. Ngo-2018 iNkanyamba uFlorence yammosha ngenene, kodwa ekugqibeleni siye sayilungisa intshukumo yakhe kwakhona. Uhlaziywe ngokupheleleyo ngezixhobo ezitsha kunye nefenitshala, uya kuba nendawo entle yokwenza iinkumbulo zeholide. Ikhaya lethu lihleli kwindlela exakekileyo, kodwa indawo yokupaka isecaleni kwaye iqhaga elibukhali likumnyango ongasemva. Ke ngoko awusoze ufune ukusebenzisa umnyango wangaphambili, kwaye uziva uzimele kakhulu. Kufuphi nayo yonke into, iimayile ezili-10 ukuya eJacksonville, iimayile ezili-13 ukuya eCamp Lejeune, iimayile ezi-3 ukuya e-Emerald Isle, iimayile ezili-19 ukuya eCherry Point, kunye neekhilomitha ezi-2 ukuya eWalmart.
1 iisofa eziyi-, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2
Kukho iivenkile ezintle kunye neendawo zokutyela kumgama wokuhamba. I-Swansboro ineepaki ezimangalisayo, iimbono kunye nembali. Kwisitalato esingaphambili kukho indawo yokutyela i-ayisikrimu kunye neelekese. Indawo entle yasePine Knoll Shores Aquarium kumgama oziikhilomitha ezili-19 kuphela. Imbali iFort Macon ikumgama oziikhilomitha ezingama-25 kuphela. Iilwandle zikude ngeekhilomitha ezi-3. I-Camp Lejeune ikude ngeekhilomitha ezili-13, kwaye isiseko se-Cherry point Marine siziikhilomitha ezili-19 kude. IJacksonville ikumgama oziikhilomitha ezili-10 kuphela. Sikwindlela enkulu, kwaye uya kuva ukugcwala kwabantu, kodwa nje ukuba ungene kwindlela yokungena uziva ngathi ukwiparadesi yakho encinci. Asikokubaxa izinto oko, KUYAMANGALISA! Ukuloba ngasemva kuyamangalisa, ndigcwalise iibhakethi ezininzi ze-shrimp, ndibambe iibomvu, igubu elimnyama, i-flounder, i-eels, imitha, kunye nentlanzi ye-puffer.
Ndifumaneka nanini na ukuba unazo naziphi na iimfuno, ngoko ke nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana kwaye undazise ukuba kukho into oyifunayo.